Barattoota: ''Madaalamuu kan qaban barattoota qofa miti. Barsiisonni haalaan barsiisuu qabu.'' - BBC News Afaan Oromoo
Barattoota: ''Madaalamuu kan qaban barattoota qofa miti. Barsiisonni haalaan barsiisuu qabu.''
Ministirri barnootaa dhiheenya kana qajeelfama barattoonni sadarkaa digrii kamiyyuu osoo hineebiifamiin dura qormaata madaallii gahumsa waliigalaa akka fudhataniif dirqisiisu hojiirra akka olchu ibseera.
Barattoonni BBCn dubbise ammoo haalichi yaaddoo itti uumusaa ibsaniiru.
Qormaanni madaallii damee barnootaa barsiftootaafi fayyaatiin hojiirra olaa turees, amma gosa barnootaafi yunivarsitoota hundattuu hojiirra akka olfamuuf murtaa'eera.
Murteen kunis barattootatti naasuu olaanaa kan uume yoo ta'u, ministirri barnootaa garuu imaammata qulqullina barnootaa eegsisuuf hojiirra olfame malee waan harawaa akka hintaane ibsa.
Barnoota waggoota shanii qormaata guyyaa tokkootiin
Yunivarsitii Baahirdaaritti damee barnoota maandisummaa elektiriikaatiin barataa waggaa arfaffaa kan ta'e Boruu (nageenya isaatiif maqaan isaa kan geeddarame) ''gahumsi barattootaa qormaata xumura waggaatti kennamuun hinmirkanaa'u,'' jedha.
''Jalqaba isaanumtuu barnoota sirrii barsiisaa hinjiran. Madaalamuu kan qabaatan barattoota qofaa miti. Barsiisoonni osoo haalaan hinbarsiisiin bartaan madaalamuus dhiisuuf garaa garummaa hinqabaatu,'' jedheera.
Boruun akka jedhutti, barataa waggaa baayyeef dhama'ee qabxii gaariin eebbifamu, motummaan dhumarratti eeguun gahumsa hinqabdu jechuun sirrii miti.
Qormaata madaallii bara kana barattoota teknoolojiitiif kenname kan baayyee waldhabsiise ta'usaa gabaasuun keenya ni yaadatama.
Boruunis hiriyoonni isaa hedduun qabxii waliigalaa 3.8 fi isaa ol qaban kuftanii jirtu jedhamuusaanii akka fakkeenyaatti kaasa.
"Barnoota waggoota afuriifi shanii akkamiin qormaata guyyaa tokkoon madaaluun danda'ama?'' jechuun yaada isaa eera.
Yunivarsitiichumatti barataa barnoota maandisummaa waggaa sadaffaa ta'e kan biraa Sisaay gama isaatiin, ''waggaa shan eeganii dhiisiitii kan amma qoramne iyyuu hinmadaalu,'' jedha.
Barataan wayita ammaa kanatti leenjii shaakallii irratti argamu kunis sababii madaalicha mormuuf qaba.
''Sababiin isaas qulqulliinni barnootaa kan mirkanaa'u qormaataan osoo hintaane, haala barnootichi ittiin kennamu duraan ilaalamuu qabaata,'' jedheera.
"Kan barataa jirru barsiisoota nurra hinfooyyofneen. Barataa kan jirrus haala rakkisaadhaan. Garuu filannoon biraa hinjiru,'' jedha.
Kunis yaada barattoota baayyee ta'uu kan dubbatu Sisaay, barattoonni hedduunis maal barbaadaniitu jechuun gaaffii keessatti akka argaman eera.
''Saffisa nu qoruuf adeemanii osoo ofiisaanii ilaalanii caalaa bu'aa qabeessa ta'a,'' jedheera.
''Osoo rakkina haala baruufi barsiisuutin jiru sirreessanii barataan ni qorama. Barataan sirnaan barate sababiin qoramuu itti sodaatu hinjiraatu,'' jedha.
Salamoon Barihee Yunivarsitii Maqaleetti barataa oogummaa gaazexessummaa waggaa sadaffaati. Innis yaada kanaan walii hingalu.
Akka yaada isaatti aadaan waliirraa garagalchuufi akkasumaan dabarfamuu babal'achaa dhufeera. Kanaafuu madaalliin dhumarratti kennamu kunis fala ta'uu danda'a jedha.
''Akka mallattoo akeekkachisaatti fayyaduu danda'a. Barataa ofitti amanu horachuufis filannoo gaarii natti fakkaata,'' jedheera.
Dhuguma qulqullinni barnootaa madaalliin foyya'aa?
Waggoota 10 darban keessa barnoonni damee motummaan xiyyeeffannaa olaanaan kennameefidha.
Kanaanis walqabate lakkoofsi dhaabbilee barnootaa olaanoofi barattootaa haalaan dabalee jira.
Wayita ammaa kanattis lakkoofsi yunivarsitootaa 36 gaheera. Akkasumas dhaabbileen barnoota olaanoo dhuunfaa 98 ta'an argamu.
Akkasumas lakkoofsi barattoota gara dhaabbilee barnoota olaanoo galanis guddachaa dhufuun bara 2013/14tti - kuma 60 gahuusaa ragaan ministeera barnootaa irraa argame ni mul'isa.
Haa ta'u malee barattoonni eebbifaman hundi qulqullina hojii isaan agarsiisuu waan hinqabaanneef, lakkoofsa hojii dhabdootaaf gummaachaa jira jedhu.
Minisiteera barnootaatti deetaa ministiraa kan ta'an Doktar Xilaayee Geetee,''Kana dura barattoota seeraa, barsiiftootaafi barattoota fayyaa madaalaa turre. Haalli sun akka warra kaan irrattis hojjatuudha kan taasifne. Kanaafuu qajeelfama haaraa taasifamee fudhatamu hinaqaatu,'' jechuun BBC'tti himaniiru.
Qajeelfamichiis imaammata waggaa sadiin dura bahee hojiirra olchuudha kan jedhan Dr Xilaayeen, sagantichis waggaan booda dhaabbilee barnootaa hundattuu hojiirra akka olfamu eeraniiru.
Kan biraas waan itti fufuufi qophii taasisuun waan barbaachisuu jecha akka haaraatti ibsame malee, imaamata hingeedaramneedha jedhaniiru. Barsiiftoonni sadarkaa tokkooffaafi lammaffaa umuriin isaanii waggaa 55 gadii ta'an haaluma walfakkaatun qormaata madaallii akka fudhatan dubbatu. ''Kan ogummaa isaatiin hinmadaalamiin abbaa seeraa ykn hakiimas hinta'u. Heyyamas hinargatu.''
Kanaafuu, sirni madaalli amma diriirfame kunis qulqullina barnootaa mirkanneessuuf daandii sirriidha, akka Dr Xilaayeetti.